Ramamimampionona Gérard: “Mila mahay resy…” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard: “Mila mahay resy…”
“Efa samy niteny fa hanaiky ny voka-pifidianana ireo kandidà roa. Raha voahaja kosa ny marina, samy tokony hanaiky ny voka-pifidianana. Satria karazana fanasarahana azy ireo ny fifidianana fa iray ihany ny filoham-pirenena malagasy. Raha iray ihany ny filoham-pirenena, tsy maintsy mivonona izy ireo: na mandresy izy, na resy.”
Izay ny fanehoan-kevitra ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), faritanin’Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, momba ny fiatrehana ny voka-pifidianana. Vonona hanaiky ho resy, ary miarahaba izay tonga eo amin’ny fitondrana. Na mandresy izy ka mahay mandresy: tsy manakora na satria hiandry kendry tohina hoe azo amin’izay ny fitondrana.
Filoham-pirenena malagasy izay voafidy eo
Tsy ny kandidà roa ihany no hiantefan’izany teny izany fa eo koa ireo rehetra mpomba sy nanohana ary nifidy azy: tokony hanaiky izay voka-pifidianana eo. Mety hanaiky ireo kandidà fa tokony ho vonona hahay mandresy sy hahay ho resy izay miaraka aminy. Eo no tena olana raha ny zava-misy eto amin’ny firenena satria efa nisy ny fanantenana…
“Mandray anjara amin’ny hisian’ny fahamarinana sy ny fangaraharana ny rehetra hahazoana manaja sy mitandro izany: mila mahay resy, mila mahay mandresy”, hoy izy. Filoham-pirenena malagasy izay voafidy eo. Tsy misy intsony hoe ity nifidy an-dRanona, iry nifidy an-dRanona.
Mbola misy ahiahy kely ihany…
Ao anatin’ny fanangonam-bokatra isika izao. Manoloana izay, mbola misy ahiahy kely ihany: ahoana ny voka-pifidianana sy ny handraisantsika izany hoe hanaiky tsara avokoa ve? Any ny ahiahin’ny rehetra ka mahatonga ny olona hiantsoantso fitoniana sy filaminana.
Tsy tonga ho azy ny filaminana fa mila zavatra marina. Antoka amin’izany ny fampanjakana ny fahamarinana ho an’izay rehetra mikirakira ny voka-pifidianana: fanangonana sy famoahana azy, ny fiarovana azy, ny fitsarana… Atao amim-pahamarinana ny fiarovana ny safidim-bahoaka hoe feon’Andriamanitra.